General Aadan Koojaar ayaa sheegay in duqaynta ay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac u gaysatay maleeshiyada Al-Shabaab taas oo kooxdaas ku qasabtay in ay jasiiradda isaga cararaan, balse aan sidaas looga hari doonin oo meel alle iyo meeshii ay gabood ka dhigtaanba loogu geli doono illaa laga wada xorreynayo degaannada Jubbaland.
Al-Shabaab ayaa deegaanka Kudhaa ku lahayd deked macmal ah oo ay ka dhoofin jirtay dhuxusha, kana heli jirtay dhaqaale xooggan. Xorreynta Kudhaa ayaa waxay jab weyn ku tahay argagixisada oo haatan laga soo wada xiray ilihii dhaqaale iyo irdihii badda oo ay hubka ka soo dejisan jireen, taas oo sahli doonta in dalka oo dhan laga wada xorreeyo.
Horjooge kale oo Shabaab ah oo isi soo dhiibay si uu u badbaado
Maamulka degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa dhowaan soo bandhigay horjooge ka mid ahaa al-Shabaab oo isu soo dhiibay ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya si uu naftiisa u badbaadsho.
Taliyaha ciidanka amniga degmada Dhuusamareeb Mahad Khaliif Rooble ayaa sheegay in horjoogaha isa soo dhiibay uu al-Shabaab u qaabilsanaa miinooyinka iyo arrimaha sirdoonka ee ay kooxdu ka fuliso gobollada dhexe. Taliyaha ayaa xusay in horjoogaha ka hor intii uusan isa soo dhiibin uu xiriir la soo sameeyay saraakiisha ciidanka booliska ee degmada.
Horjoogaha isa soo dhiibay oo lagu magacaabo Cabdullaahi Axmed ayaa isagu sheegay in uu xilligii uu al-Shabaab ka tirsanaa uu hawlgallo argagixisonimo ahna uu ka fuliyay magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo deegaanno ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud. Waxuu intaa ku daray in uu gadaal ka garwaaqsaday in la qalday, haatanna uu go’aansaday inuu isaga haro afkaarta gurracan ee kooxda oo uu xusay inay yihiin kuwo liddi ku ah Soomaalinimadda iyo waliba Islaamnimada.
Horjoogaha ayaa sidoo kale sheegay in uu towbadda ka sokow uu doonayo in uu naftiisa badbaadiyo maadaama uu arkay in horjoogayaasha al-Shabaab ee aan isa soo dhiibin ay ciidamada dowladdu mid mid u ugaarsanayaan.
Luuq oo lagu xiray 22 qof oo looga shakiyay inay xubno ka yihiin Shabaab
Ciidanka ammaanka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa howlgal amni oo ay ka sameeyeen qeybo ka tirsan degmada waxay ku soo qab-qabteen 22 qof oo ay uga shakisan yihiin inay ka tirsan yihiin kooxda al-Shabaab ee uu gabalkeedu dhacay.
Ciidammada ayaa dadka la tuhunsanyahay kusoo qabtay hawlgal lagu adkaynayay nabadgalyada oo ay ka fuliyeen xaafadaha magaalada. Taliyaha ciidanka ammaanka Luuq Siyaad Walbashaati ayaa sheegay inay howlgalka fuliyeen kaddib markii ay soo baxday cabsi laga qabo in xubno ka tirsan kooxda al-Shabaab ay si dhuumaalaysi ah ku soo galeen degmada si ay u waxyeelleeyaan shacabka aan waxba galabsan.
Walbashaati ayaa ballanqaaday inay sii wadi doonaan howlgallada ay ku xaqiijinayaan ammaanka, isagoo shacabka ugu baaqay inay ciidanka ammaanka kala shaqeeyaan sugista ammaanka degmada oo ay soo sheegaan dambiileyaasha caadeystay waxyeeleynta shacabka Soomaaliyeed.
Dhowaan ayaa hawlgal kan la mid ah laga fuliyay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo, waxaana la filayaa in degmooyinka kale ee gobolka laga sameeyo hawlgallo looga hortagayo falalka amni darrada ah iyo xasuuqa bani’aadannimada ka baxsan ee ay kooxda al-Shabaab caadada ka dhigatay.
Al-Qaacida iyo ISIL oo ku loollamaya Shabaabka gabalkoodu dhacay
Xamil al-Bushra, ergay ku hadlay magaca ISIL (Daacish), ayaa farriin furan u daray amiirka al-Shabaab, Axmed Cumar (Abu-Cubeydah), waxuuna al-Shabaab ugu baaqay in raacada tusaalaha Boko Xaraamta Neyjeeriya oo ay ku biirto ururka ISIL.
Ururka ISIL waa ogsoonyahay in al-Shabaab ay tahay urur laga adkaaday oo gabalkiisu dhacay, laakiin waxay rabaan in ay la wareegaan dagaalyahannada ururka ee u ku sugan dalal ka tirsan bariga Afrika, halkaas oo aysan ISIL haatan joogin. Sababta kale ee ay ISIL u rabto in ay la wareegto al-Shabaab waa iyadoo aragta fursad ay uga takhalusto urur-weynaha al-Qaacida oo uu loollan kala dhaxeeyo.
Horjoogayaasha hoose ee al-Shabaab waxay xiiseynayaan, qaarkoodna ayba sheegeen in ay rabaan in ururkoodu uu ISIL ku biiro waayo ISIL way ka taajirsan tahay al-Qaacida oo waxay bililiqeysteen bangiyadii Ciraaq, waxeyna iibshaan shidaalka goobaha ay dalkaas ka maamulaan. Balse ku biiridda ISIL waxaa diiddan amiirka Axmed Cumar, amiirka al-Shabaab, oo isagu ka baqaya in horjoogayaashiisa hoose ay ku biiritaanka ISIL ay uga faa’ideystaan in ay isaga ku afgambiyaan. Sidaa daraadeed, waxuu aaminsanyahay in xukunkiisa uu badbaadi karo kaliya haddii al-Shabaab ay ka sii mid ahaadaan al-Qaacida.
Si kastaba ha ahaatee waxaa muuqata in farriinta ISIL ay sii shidday khilaafkii ka dhex aloosnaa madaxda al-Shabaab taasoo dedejin doonta burburka argagixisada dadkeenna dhibta ku heysa.